Nehemiya anoenderera mberi nekugadzirisa zvinhu (1-31)
Chegumi chinofanira kupiwa (10-13)
Sabata harifaniri kusvibiswa (15-22)
Kuroorerana nemamwe marudzi kunorambwa (23-28)
13 Pazuva iroro bhuku raMozisi rakaverengwa vanhu vachinzwa;+ uye makawanikwa makanyorwa kuti hapatombofaniri kuva nemuAmoni kana muMoabhi+ anopinda muungano yaMwari wechokwadi,+ 2 nekuti ivo havana kunosangana nevaIsraeri nechingwa nemvura, asi vakabhadhara Bharami kuti avatuke.+ Asi Mwari wedu akachinja kutuka kwacho kukava kukomborera.+ 3 Pavakangonzwa Mutemo wacho, vakatanga kubvisa pavaIsraeri vanhu vese vekune dzimwe nyika.*+ 4 Izvi zvisati zvaitika, Eriyashibhi,+ hama yaTobhiya+ ndiye aiva mupristi aiona nezvedzimba dzekuchengetera zvinhu dzeimba* yaMwari wedu.+ 5 Akanga amupa imba huru yekuchengetera zvinhu, yavaimboisa mupiro wezviyo,* zvinonhuhwirira zvichena, nemidziyo nechegumi chezviyo, waini itsva nemafuta,+ zviya zvaifanira kupiwa vaRevhi,+ vaimbi nevarindi vepamagedhi, pamwe chete nemupiro wevapristi.+ 6 Panguva yese iyi ndakanga ndisiri muJerusarema, nekuti ndakaenda kuna mambo mugore rechi32+ raMambo Atashasta+ weBhabhironi; uye papera nguva ndakakumbira mambo kuti andibvumire kumbobva pabasa. 7 Ndakabva ndasvika kuJerusarema ndikaona zvinhu zvakaipa zvikuru zvakanga zvaitwa naEriyashibhi,+ achiitira Tobhiya.+ Akanga amupa imwe yedzimba dzekuchengetera zvinhu muchivanze cheimba yaMwari wechokwadi. 8 Izvi hazvina kana kumbondifadza, saka ndakatora midziyo yese yaTobhiya yaiva muimba yekuchengetera zvinhu* ndikaikanda panze. 9 Pashure paizvozvo ndakapa mirayiro, vachibva vachenesa dzimba dzekuchengetera zvinhu;* uye ndakadzorera imomo midziyo yeimba yaMwari wechokwadi,+ pamwe chete nemupiro wezviyo nezvinonhuhwirira zvichena.+ 10 Ndakaonawo kuti vaRevhi+ vakanga vasina kupiwa migove yavo,+ saka vaRevhi nevaimbi avo vaiita basa vakanga vaenda, mumwe nemumwe kumunda wake.+ 11 Saka ndakatsiura vatevedzeri vevatongi+ ndikati: “Neiko imba yaMwari wechokwadi yaregeredzwa?”+ Ndakabva ndavaunganidza ndikavadzorera panzvimbo dzavo. 12 Uye vaJudha vese vakaunza chegumi+ chezviyo, waini itsva, nemafuta kudzimba dzekuchengetera zvinhu.+ 13 Ndakabva ndaita kuti mupristi Sheremiya nemunyori Zadhoki naPedhaya wekuvaRevhi vaone nezvedzimba dzacho; vachibatsirwa naHanani mwanakomana waZakuri mwanakomana waMataniya, nekuti varume ava vaivimbwa navo. Ndivo vaiva nebasa rekupa hama dzavo migove yadzo. 14 Ndiyeukeiwo+ Mwari wangu, pamusoro peizvi, uye musadzima mabasa angu erudo rusingachinji andakaitira imba yaMwari wangu nebasa rinoitwa ipapo.+ 15 Mumazuva iwayo ndakaona vanhu muJudha vachitsika-tsika zvisviniro zvewaini paSabata,+ vachiuya nemirwi yezviyo vachiitakudza madhongi, uye vachiuya newaini, mazambiringa, maonde, nemitoro yemarudzi ese muJerusarema pazuva reSabata.+ Saka ndakavatsiura kuti vasatengesa zvekudya pazuva iroro.* 16 Uye vaTire vaya vaigara muguta vaiuya nehove nezvekutengesa zvemarudzi ese, vachizvitengesera vanhu veJudha muJerusarema paSabata.+ 17 Saka ndakatsiura vakuru vakuru veJudha ndikavati: “Ndicho chii ichi chakaipa kudai chamuri kuita, muchitosvibisa zvenyu zuva reSabata? 18 Izvi handizvo here zvakaitwa nemadzitateguru enyu, zvikaita kuti Mwari wedu aunze nhamo yese iyi patiri nepaguta rino? Iye zvino mava kuwedzera kutsamwirwa kwaIsraeri nekusvibisa kwamuri kuita Sabata.”+ 19 Saka mumvuri pawakangotanga kusvika pamagedhi eJerusarema Sabata risati ratanga, ndakarayira kuti masuo avharwe. Ndakataurawo kuti vasaavhura kusvikira Sabata rapfuura, uye ndakaisa vamwe vashandi vangu pamagedhi acho kuti pasava nemutoro unopinda pazuva reSabata. 20 Saka vaya vaichinjanisa zvinhu nevaitengesa zvinhu zvemarudzi ese vakarara kunze kweJerusarema kamwe chete kana kaviri. 21 Ndakabva ndavayambira ndikati kwavari: “Muri kurarirei pamberi perusvingo? Kana mukazviita zvakare, ndichakubvisai nechisimba.” Kubvira panguva iyoyo havana kuzouya paSabata. 22 Uye ndakaudza vaRevhi kuti vagare vachizvichenesa, vouya vachirinda magedhi acho kuti Sabata rirambe riri dzvene.+ Ndiyeukeiwo nekuda kweizvi, haiwa Mwari wangu, uye ndinzwirei tsitsi maererano neukuru hwerudo rwenyu rusingachinji.+ 23 Mumazuva iwayo ndakaonawo vaJudha vakanga varoora* madzimai+ echiAshdhodhi,+ echiAmoni, neechiMoabhi.+ 24 Hafu yevanakomana vavo yaitaura chiAshdhodhi, uye imwe hafu yaitaura mitauro yemamwe marudzi, asi hapana aigona kutaura mutauro wevaJudha. 25 Saka ndakavatsiura, ndikashevedzera kutukwa pavari, ndikarova vamwe varume+ ndikavadzura bvudzi, ndikaita kuti vapike naMwari ndichiti: “Musapa vanakomana vavo vanasikana venyu, uye musagamuchira chero mwanasikana wavo kuti mupe vanakomana venyu kana kuti mutore imimi.+ 26 Havasi ivo vakaita kuti Mambo Soromoni weIsraeri atadze here? Pamarudzi mazhinji hapana mambo ainge akafanana naye;+ uye aidiwa naMwari wake,+ zvekuti Mwari akamuita mambo wevaIsraeri vese. Asi madzimai ekune dzimwe nyika akatoita kuti naiyewo atadze.+ 27 Zvinotoshamisa kuti muri kuita zvinhu zvakaipa kudai zvisina kutendeka kuna Mwari wedu muchiroora madzimai ekune dzimwe nyika!”+ 28 Mumwe wevanakomana vaJoyadha+ mwanakomana wemupristi mukuru Eriyashibhi+ akanga ava mukuwasha waSanibharati+ muHoroni. Saka ndakamudzinga kuti abve kwandiri. 29 Yeukai, haiwa Mwari wangu, kuti vakasvibisa upristi nesungano yeupristi+ nevaRevhi.+ 30 Ndakavanatsa pazvinhu zvese zvinosvibisa zvekune dzimwe nyika, ndikapa vapristi nevaRevhi mabasa, mumwe nemumwe basa rake,+ 31 ndikaronga nezvekuunzwa kwehuni+ panguva dzakatarwa uye nezvezvibereko zvaitanga kuibva. Mwari wangu, ndiyeukeiwo mundikomborere.*+
^ Kana kuti “vaiva nemumwe mubereki asiri wechiIsraeri.”
^ Kana kuti “dzetemberi.”
^ Kana kuti “muimba yekudyira.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “pazuva iroro ndakavayambira kuti vasatengesa zvekudya.”
^ Kana kuti “vapinza mudzimba dzavo.”